T-34 (2018) | MM Movie Store
((ဒီကားရဲ့ အသကျဟာ တငျ့ထိုးစဈဆငျမှုတှနေဲ့ တငျ့ကညျြဆနျတှတေဈဝုနျးဝုနျး ပဈခတျထိမှနျခကျြတှဖွေဈပါသညျ…))စဈကားကောငျးတှေ မြှျောလငျ့နတေဲ့ ပရိတျသတျတှအေတှကျမြှျောလငျ့ရကြိုးနပျတဲ့ကားတဈကားလာပါပွီဗြား….
ဒီကားက ဒုတိယ ကမ်ဘာစဈအတှငျး ရုရှားနဲ့ ဂြာမနျစဈဖွဈတဲ့အခြိနျစီးခငျြးထိုးခဲ့တဲ့ တငျ့ကားတှအေကွောငျးကို အဓိက ထားရိုကျကူးပွထားတာပါ….
ပွသခြိနျ ၂နာရီကြျောရှိခဲ့ပမေယျ့ T-34 အမွောကျသံတဈဂြိနျးဂြိနျး ကညျြဆံသံတဈဝီဝီနဲ့အပွနျအလှနျတိုကျခိုကျမှုကွားမှာ ခငျဗြားဟာ စိတျဝငျစားလှနျးတော့ တောငျ့တောငျ့ကွီးကွညျ့မိပွီး၂နာရီကြျောဆိုတာဆိုတာ ဘာမှနျးမသိဖွဈသှားလိမျ့မယျ….
ဇာတျလမျးအစမှ အဆုံးထိ ခပျသှကျသှကျခပျရှငျးရှငျးနဲ့ကို Tempo ခခြိနျဆိုတာတောငျမရှိသလောကျပဲ…..ရိုကျခကျြတှနေဲ့ခပျပါးပါးနောကျခံတေးကလညျး တကယျ့ကို ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားဖှယျအတိပဲ….
ရုရှားဘကျကတိုကျရညျခိုကျရညျကောငျးတဲ့ တငျ့ကှနျမနျဒါတဈယောကျဖွဈတဲ့ Nikolay Ivushkinဟာဂြာမနျတငျ့ကားခွောကျစီးကို သူ့ရဲ့ T-34တငျ့ကားတဈစီးတညျးနဲ့အကုနျအပွတျခမြှေုနျးနိုငျခဲ့တယျ….၆စီးကို တဈစီးထဲနဲ့ခမြှေုနျးသှားနိုငျတာကွညျ့ရငျ သူ့ရဲ့အရညျအခငျြးကိုခနျ့မှနျးမိနိုငျကောငျးပါရဲ့…
သို့ပမေယျ့ နောကျဆုံးတဈစီးတဈစီးကိုခမြှေုနျးနိုငျခဲ့ပမေယျ့ သူအဖမျးခံလိုကျရတယျ…ဒီလိုနဲ့ ဂြာမနျစဈသုံပနျးဘဝကိုရောကရှိသှားတယျ…ဒီအခြိနျမှာ ဂြာမနျတှအေတှကျရုရှားတှရေဲ့ တငျ့စဈကစားဟနျကထိတျလနျ့စရာအဖွဈသိရှိခဲ့ပွီးတဲ့နောကျမှာ သူတို့အစီအစဉျတဈခုဆှဲခဲ့တယျ…
ဂြာမနျတှဟော နောကျဖွဈလာမယျ့ရုရှားတပျနီနဲ့ရငျဆိုငျတိုကျခိုကျနိုငျဖို့အထူးသဖွငျ့ရုရှားတငျ့တှကေိုဘယျလိုအနိုငျရမလဲဆိုတာကို ဂြာမနျမြိုးဆကျသဈဗိုလျလောငျးတှကေိုလကျတှကေ့ကြလြလေ့ာနိုငျအောငျလို့ တဈကယျ့ရုရှားတငျ့တဈစီးနဲ့တိုကျခိုကျပေးဖို့စီစဉျလိုကျတယျ….
အဲ့အခြိနျမှာ Nikolay Ivushkinနဲ့တိုကျခိုကျဖူးတဲ့ဂြာမနျခေါငျးဆောငျဟာNikolay Ivushkin ရဲ့အရညျအခငျြးကိုသိတဲ့အတှကျ Ivushkin ကိုလူအခြို့ပေးရှေးပွီးတော့စုတျပွတျသတျနတေဲ့ရုရှားတငျ့တဈစီးကိုပေးလိုကျတယျ…အမွောကျကညျြဆနျမပါဘဲနဲ့ ဂြာမနျဗိုလျလောငျးတှနေဲ့တိုကျခိုငျးတယျ…
((ဒီကားရဲ့ အသက်ဟာ တင့်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့ တင့်ကျည်ဆန်တွေတစ်ဝုန်းဝုန်း ပစ်ခတ်ထိမှန်ချက်တွေဖြစ်ပါသည်…))စစ်ကားကောင်းတွေ မျှော်လင့်နေတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက်မျှော်လင့်ရကျိုးနပ်တဲ့ကားတစ်ကားလာပါပြီဗျား….
ဒီကားက ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း ရုရှားနဲ့ ဂျာမန်စစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်စီးချင်းထိုးခဲ့တဲ့ တင့်ကားတွေအကြောင်းကို အဓိက ထားရိုက်ကူးပြထားတာပါ….
ပြသချိန် ၂နာရီကျော်ရှိခဲ့ပေမယ့် T-34 အမြောက်သံတစ်ဂျိန်းဂျိန်း ကျည်ဆံသံတစ်ဝီဝီနဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုကြားမှာ ခင်ဗျားဟာ စိတ်ဝင်စားလွန်းတော့ တောင့်တောင့်ကြီးကြည့်မိပြီး၂နာရီကျော်ဆိုတာဆိုတာ ဘာမှန်းမသိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်….
ဇာတ်လမ်းအစမှ အဆုံးထိ ခပ်သွက်သွက်ခပ်ရှင်းရှင်းနဲ့ကို Tempo ချချိန်ဆိုတာတောင်မရှိသလောက်ပဲ…..ရိုက်ချက်တွေနဲ့ခပ်ပါးပါးနောက်ခံတေးကလည်း တကယ့်ကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတိပဲ….
ရုရှားဘက်ကတိုက်ရည်ခိုက်ရည်ကောင်းတဲ့ တင့်ကွန်မန်ဒါတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Nikolay Ivushkinဟာဂျာမန်တင့်ကားခြောက်စီးကို သူ့ရဲ့ T-34တင့်ကားတစ်စီးတည်းနဲ့အကုန်အပြတ်ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့တယ်….၆စီးကို တစ်စီးထဲနဲ့ချေမှုန်းသွားနိုင်တာကြည့်ရင် သူ့ရဲ့အရည်အချင်းကိုခန့်မှန်းမိနိုင်ကောင်းပါရဲ့…
သို့ပေမယ့် နောက်ဆုံးတစ်စီးတစ်စီးကိုချေမှုန်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့် သူအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်…ဒီလိုနဲ့ ဂျာမန်စစ်သုံပန်းဘဝကိုရောကရှိသွားတယ်…ဒီအချိန်မှာ ဂျာမန်တွေအတွက်ရုရှားတွေရဲ့ တင့်စစ်ကစားဟန်ကထိတ်လန့်စရာအဖြစ်သိရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုဆွဲခဲ့တယ်…
ဂျာမန်တွေဟာ နောက်ဖြစ်လာမယ့်ရုရှားတပ်နီနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အထူးသဖြင့်ရုရှားတင့်တွေကိုဘယ်လိုအနိုင်ရမလဲဆိုတာကို ဂျာမန်မျိုးဆက်သစ်ဗိုလ်လောင်းတွေကိုလက်တွေ့ကျကျလေ့လာနိုင်အောင်လို့ တစ်ကယ့်ရုရှားတင့်တစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ပေးဖို့စီစဉ်လိုက်တယ်….
အဲ့အချိန်မှာ Nikolay Ivushkinနဲ့တိုက်ခိုက်ဖူးတဲ့ဂျာမန်ခေါင်းဆောင်ဟာNikolay Ivushkin ရဲ့အရည်အချင်းကိုသိတဲ့အတွက် Ivushkin ကိုလူအချို့ပေးရွေးပြီးတော့စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ရုရှားတင့်တစ်စီးကိုပေးလိုက်တယ်…အမြောက်ကျည်ဆန်မပါဘဲနဲ့ ဂျာမန်ဗိုလ်လောင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုင်းတယ်…